Israel iyo Falastiiniyiinta oo nabadda ka wada shaqaynaya – Radio Daljir
Israel iyo Falastiiniyiinta oo nabadda ka wada shaqaynaya
Maajo 13, 2012 12:00 b 0
Ramalah, May 13 – Wada-xaajoode sare oo dhinaca nabadda ah oo u dhashay wadankaasi Afghanistan ayaa lagu toogtay magaalada Kabul sida ay sheegeen saraakiisha wadanka Afghanistan.
Arsala Rahmani, oo hore wasiir uga ahaa dowladdii Daalibaan islamarkaasina ahaa xubin muhiim ah o oo ka tirsan golaha sare ee nabdda dalkaasi Afghanistan ayaa ku hawlanaa wadahadal lagula jiray dhaqdhaqaaqi kacdoonka ka wada dalkaasi ee Daalibaan.
Ninkani oo ay aad isugu dhowaayeen madaxweyne Xamiid Karizaay ayaa kaalin mug leh ka qaatay wadahadalo lala galay taliyayaal sarsare oo ka tirsanaa Daalibaan .
Saraakiisha wadankaasi Afghanistan ayaa sheegay in Mr Rahmani uu toogtay nin aan haybtiisa la garanayn oo watay baabuur Toyota ah , xilli uu ku soo jeeday xarunta shaqadiisa oo ku taalla galbeedka Kabul.
Wadahadalka nabadda ee Afghanistan ee lagula jiro dhaqdhaqaaqa daalibaan ayaa khatar galay sanadkii hore markii weerar ismiidaamin ah lagu dilay Burhaanu Diin Rabbaani oo ahaa madaxii golaha sare ee nabadda Afghanistan.
Golahaasi ayaa immika waxaa hogaamiyaha wiilka Maraykanka wax ku soo bartay Salaaxu Diin Rabbaani oo oo uu dhalay Burhaanu Diin Rabbani .
Golaha sare ee nabadda Afghanistan ayaa waxaa sameeyey madaxweyne Kariizay 2 sano hor si la isugu dayo in wadahadal lala galo kooxaha kacdoonka ka wada dalkaasi Afghanistan.
Diyaarad ku burburtay waqooyiga dalka Nepal
Booliska Kenya oo baadigoobaya nin looga shakiayay Al-shabaab oo dhalasho ahaan kasoo jeeda dalka Germany